Su'aalaha La Weydiiyo - Jesson Flag Arts & Crafts Co., Ltd.
Miyaad u bandhigaysaa macmiil kasta macluumaadkiisa dhinacyada kale ee ka baxsan?
Marna. Waan fahamsanahay sida ay muhiim ugu tahay macluumaadka ganacsi macaamiil kasta. Astaan ​​kasta, qoraal ama macluumaad kale oo gaar loo leeyahay si adag ayaa qarsoodi ah. Waxaan ku shaqeyneynaa dhammaan sharci ahaan iyo anshax ahaanba.
Maxay yihiin saacadahaaga Adeegga Macaamiil?
Shaqaalaheena taageerada waxaa la heli karaa 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii. Waxaa lagula xiriiri karaa skype ama emayl.
Miyaan dalban karaa amarkayga khadka tooska ah wakhti kasta?
Haa, amarada khadka tooska ah ayaa la dhigi karaa 24 saacadood maalintii.
Ma soo celin karaa alaabada aan dalbaday ka dib markaan helo ka dib?
Shiinaha-Calan-Sameeyayaashu ma awoodaan inay aqbalaan soo celinta shaxanka daabacan iyadoo ay ugu wacan tahay dabeecaddeeda caadiga ah.
Haddii aadan ku qanacsaneyn iibsashadaada, fadlan la xiriir macaamiishayada adeegga macaamiisha muddo 7 maalmood gudahood ah laga soo bilaabo helitaanka amarkaaga, iyo annaga oo aan u fiirsano, waxaan kuu sameyn doonnaa saxitaanka saxda ah.
Haddii aad aragto inay jiraan waxyaabo yaryar ama wax lagu dhaqi karo oo ku jira shaxanka daabacan ama dhibaatooyinka tolida oo saameyn ku yeelan kara muuqaalka, Shiinaha-Calanka-Sameeyayaasha ayaa jeclaan lahaa inay ku siiyaan qiimo dhimis dhan 20% amarkan, kaas oo lagu soo furan karo amarkaaga soo socda, ugu yaraan xadka ugu yar.
Waa maxay noocyada faylasha ee Shiinaha-Calanka-Sameeyayaashu aqbalaan?
AI iyo PDF waa laba qaab oo badanaa loo isticmaalo daabacaadda warshadeenna. Noocyada kale ee faylka waa la aqbali karaa, laakiin cabirka garaafku waa inuu ahaadaa 1: 1 qaababka kale.
Ma xaqiijin kartaa midabka daabacaadda inuu la mid yahay farshaxankeyga?
Dhammaan faylasha RGB waxaa loo rogi doonaa CMYK markii la daabaco. Beddelaadani waxay u horseedi kartaa kala duwanaansho midab yar, taas oo saameyn ku yeelan doonta saameynta daabacaadda ugu dambeysa. Si loo yareeyo farqiga midabka, waxaan ku hubin doonaa midabkaaga farshaxanka kaarka caadiga ah ee Pantone C, markaa fadlan sheeg midabkaaga Pantone markaad soo gudbineyso farshaxankaaga.
Waxaan ubaahanahay xoogaa caawimaad ah si aan u diyaariyo feylkayga fanka. Ma haysaa tilmaam farshaxan ah oo aad ku hubin karto?
Haa, dhagsii Faahfaahinta farshaxanka si aad u qeexdo faahfaahin badan. Haddii aad u baahan tahay caawimaad dheeraad ah, waxaad la xiriiri kartaa wakiilladayada adeegga macaamiisha.
Sideen ku codsadaa adeegga Naqshadeynta Farshaxanka?
Si aad uga faa'iideysato adeeggayada Naqshadeynta Farshaxanka, marka hore, dooro badeecad aad rabto inaad iibsato. Bogga Shayga, guji Naqshadeynta Farshaxanka. Ka dibna dooro hal nooc oo adeeg farshaxan ah sida waafaqsan baahiyahaaga.
Dalbo & Caawinta rarka
Noocee ah habka maraakiibta aad isticmaasho?
Waxaan bixinaa adeeg maraakiibta lagu kalsoonaan karo oo xirfad leh si loo hubiyo in amarku kugu soo gaadho si dhakhso leh oo nabdoon. FedEx iyo UPS waxaa badanaa la isticmaalaa marka la soo dirayo amarkaaga, iyo haddii aad u baahan tahay inaad ku rarto habab kale oo rar ah, fadlan la xiriir wakiilladayada adeegga macaamiisha.
Ma cusbooneysiin karaa Cinwaanka Dukaanka?
Haa, waad cusbooneysiin kartaa rarkaaga ama wax ka beddeli kartaa cinwaanka maalin ka hor inta aan amarka la qorsheeyay in la raro. Fadlan isla markiiba nala soo xiriir oo Wakiilka Adeegga Macaamiilku wuu caawin doonaa wuuna xaqiijin doonaa isbeddelkan.
Maxaan sameeyaa haddii aanan ka heli karin waxyaabaha qaarkood xirmada?
irst, hubi in amarka la diray oo si buuxda loo keenay. Amarkaaga waxaa lagu geyn karaa sanduuqyo badan, markaa hubi in dhammaan xirmooyinka la keeno. Haddii sanduuqyada oo dhan la helay, si taxaddar leh dib ugu eeg warqadda wax lagu duubo oo baaraan waxa ku jira xirmooyinkaaga. Nala soo xiriir haddii amarkaaga la keenay alaab ama qaybo maqan.
Muddo intee le'eg ayay qaadanaysaa in la helo amarkayga?
Caadi ahaan, waxaan bixinaa 1-maalin, 2-maalin, 3-maalin iyo 5-maalmood oo hogaaminta ah (* kadib marka la ansixiyo farshaxanka) dhammaan alaabooyinkayaga caadada ah, oo lagu daray 2-5 maalmood oo ganacsi oo loogu talagalay dhoofinta taas oo kuxiran xulashadaada macquul. Faahfaahin dheeri ah oo rar ah, fadlan tixraac Shipping & Delivery
Ka waran haddii xirmadaydu ay kormeerto kastamadu?
Kormeerka kastamku badanaa waa kormeer caadi ah. Haddii alaabtu ay ku lug leedahay xuquuqda lahaanshaha astaanta, waa lagama maarmaan inaad adiga siiso warqadda nooca Oggolaanshaha oo alaabada ay tahay in la baaro kastamka. Haddii ay jiraan kala duwanaansho u dhexeeya xogta kastamka iyo tirada dhabta ah ee walxaha, waa inaad bixisaa macluumaad ama aad qortaa warbixin.